स्वास्थ्य / खानपिन – Yuwa Aawaj
स्वास्थ्य : कुकुरडाइनो नेपालमा जंगली अवस्थामा पाइने औषधीय गुण भएको वनस्पति हो । सुगरका बिरामीले यस्को मुन्टा खादा फाइदा हुने देखिन्छ। बहुवर्षीय पोथ्रा वर्गमा पर्ने यो वनस्पति लहरायुक्त हुने गर्दछ । कुर डाइनो एउटा लहरो प्रजातिको बनस्पति हो यो गर्मि क्षेत्रमा बिशेष तराईमा, पहाडी तल्लो भेगमा पाइन्छ यसको लहरोमा काँडा हुन्छ्न बाक्लो यसो हेर्दा पानका जस्ता पात हुन्छन् यो बाख्रा को घाँस पनि हो ।हिन्दु सस्कारमा यो साउने संक्रान्तिमा लुतो फाल्दा नभै हुदैन ।लुतो फाल्दा कुकुर डाइनो ,भलायो,मकै बोट ,सिरु ,बेसार ,काग भलायो ,कुरिलो आदि चाहिन्छ । कुकुर डाइनो एक औषधिय गुण भएको लहरा मानिन्छ । कुकुरडाइनो अल्लि मल भएको ठाउँमा छ भने यस्को मुन्टा ठुला ठुला हुन्छन । यस्का मुन्टा टिपेर तरकारी वा अचार बनाएर खान सकिन्छ । स्वास्थका हिसाबले अतिनै लाभदायक हुन्छ । आजकाल जङ्गलबाट टिपेर ल्याएर शहरमा बेचबि
स्वास्थ्य : हरियो प्याजले निको पार्छ यस्ता रोगहरु, जसकाे बारेमा धेरैलाई थाहै नहुनसक्छ ! हरियो प्याज स्वादका लागि मात्र नभई स्वास्थका लागि पनि उतिकै फाइदा जनक मानिनछ । यो एउटा कन्दमुल हो । यसको सेवन गर्दा विभिन्न किसिमका रोग बाट मुक्त हुन सकिन्छ । धेरै जसो मानिहिरुलाई थाहा नहुन पनि सक्छ यसको सेवन गर्दा कति फाइदा हुन्छ भनेर हरियो प्याजले मोटो शरीरको तौल पातलो बनाउँछ । यसले ब्ल्ड सुगर लेभललाई कन्ट्रो'ल गर्ने भएकाले डायबे'टीजको बिरा'मीलाई निक्कै फाइदा पु¥र्‍याउँछ। यसमा एन्टी इन्फ्ले'मेटरीको गुण भएकाले यसले अर्थराइटिस हुनबाट जोगाउँछ । हरियो प्याजमा भिटामिन ए समेत रहेको हुँदा यसले आँखाको ज्योति बढाउनुका साथै रतन्धो हुनबाट पनि जोगाउँछ । यसमा एन्टी ब्याक्टे'रियल गुण भएकाले यसले रु'घाखोकी तथा टाउँको दुखेकोलाई सन्चो बनाउँछ। यसमा भिटामिन सी को मात्रा धेरै हुने भएकाले कम'जोरी हटाउँछ र भर
एजेन्सी : हरियो धनियाँ मसलाका रूपमा वा खानालाई सजाउने र सुन्दर देखाउनका साथै अचारको रूपमा पनि प्रयोग गरिन्छ । धनियाँको प्रयोग हामी सकेसम्म यीनै कामका लागी प्रयोग गर्छौ तर यसले स्वास्थ्यमा गर्ने फाइदा बारे भने हामीलाई त्यति ज्ञान छैन् । हाम्रा अग्रजहरूले धनियाँ प्रयोग गर्न सुरू गर्नुको कारण भने सायद केही स्वास्थ्यलाई फाइदा गर्ने गुणहरू भेटेर नै हुन सक्छ । धनियाँले स्वास्थ्यमा गर्ने प्रभावका बारेमा केही खोजहरू समेत भएका छन् । धनियाँ स्वास्थ्यका हिसाबले निखै महत्वपूर्ण पदार्थ भएको समेत अनुसन्धानकर्ताहरू बताउँछन् । हामी पनि थाहा पाऔ के-के छन् धनियाँ खानुका फाइदाहरू ! धनियाँमा पाइने एन्टीसेप्टिक र एन्टी'अक्सिडेन्टले तपाईको अनुहारलाई फाइदा गर्छ । यसले अनुहारमा निखारता तथा चमक ल्याउन समेत मद्धत गर्छ । धनियाँको हरियो पात पिसेर अनुहारमा लगाउनु फाइदाजनक हुन्छ । यसले छालाको एलर्जीको समस
स्वास्थ्य : खानेलाई मात्रै होइन अन्य मानिसलाई पनि फोक्सोको समस्या हुनेगर्दछ । यदि तपाईले चुरोट खानुहुन्छ भने फोक्सो अवश्य खराब हुन्छ । तर घरेलु विधि प्रयोग गरेर ७२ घण्टाभित्र आफ्नो फोक्सो सफा गर्न सक्नुहुन्छ । यस्तो विधि सुरु गर्नुभन्दा पहिला दुग्धजन्य पदार्थहरुलाई आफ्नो भोजनबाट टाढा राख्नुहोला । यो निकै महत्वपूर्ण कुरा हो किनभने दुग्धजन्य पदार्थको सेवनले गर्दा फोक्सोमा भएका विषाक्त तत्वहरुलाई बाहिर फाल्न शरीरलाई गाह्रो पर्छ । घरेलु विधि प्रयोग गर्ने तरीकाः १. यो विधि सुरु गर्दाको पहिलो दिनमा सुत्नु अगाडि जडिबुटीबाट बनेको चिया खानुहोस् । यस्तो चिया खानाले पेटमा भएका र कब्जि'यतको कारक बनेका विषाक्त तत्वहरु नाश हुन्छन् जसले गर्दा फोक्सोलाई आफ्नो काम गर्न सजिलो हुन्छ । २. दोश्रो दिनमा बिहानको खाना खानुपूर्व दुईवटा कागतीलाई तातो पानीमा मिसाएर खानुहोस् । त्यसपछि ३०० मिली भुँइकटहर
एजेन्सी : फलफूल खाँदा स्वास्थ्यलाई फाइदा पु¥र्याउँछ । जसमध्ये अंगुर खाँदा पनि स्वास्थ्यलाई विभिन्न फाइदा पुर्याउँने चिकित्सकहरु बताउँछन् । कालो अंगुर खाँने गर्दा स्वास्थ्यलाई निकै फाइदा पुग्छ जुन फाइदा यश प्रकार रहेका छन् । १. कालो अंगुरको सेवनले रगतमा कोले'स्ट्रोल को निमार्ण गर्न रोक्छ र मोटोपना बाहेक अन्य स्वास्थ समस्याहरुबाट पनि बचाँउछ । २. यसले शरिरमा बढि भएको युरिक एसिडको स्तर कम गर्छ जसले कि'ड्नीमा भार बढ्दैन र कि'ड्नी स्वस्थ हुन्छ । ३. क्या'न्सरबाट बच्नको लागि कालो अंगुर फाइदाजनक छ । खासगरि छालाको क्या'न्सरबाट बच्नको लागि यसको सेवन धेरै नै प्रभा'वकारी हुन्छ । ४. अल्जा'इमरको बिरा'मीहरुको लागि कालो अंगुर फाइदाजनक हुन्छ । यसमा रहेको रेसवे'राट्रोल नामक तत्व अल्जा'इमरबाट ल'ड्नको लागि धेरै नै प्रभा'वकारी हुन्छ । ५.यसमा पाइने ए'न्टिअक्सि'डेन्टले हार्ट अ'ट्याक र हाई कोले
स्वास्थ्य : नेपालीको भान्सा धान्ने सब्जी, स्कुस । घर–आँगनमा सजिलै फल्ने । धेरै फल्ने । स’स्तो, स्वादिलो, सुपा’च्य र स्व’स्थ्यकर । स्कुस वहुउपयोगी तर’कारी । स्कुसको मु’न्टा, फल र जरा सबै स्वाद फेर्दै खान सकिन्छ । त्यससँगै स्कुस धेरै मात्रामा उत्पादन हुने भएकाले यसले हाम्रो खाद्य भ’ण्डारलाई पनि समृद्ध बनाएको छ । मूख्य कुरा, स्कुस स्वा’स्थ्यका लागि कम्ता पो’षिलो छैन । तरकारी बनाएर खाए हुन्छ, उसिनेर खाए हुन्छ, मःम बनाएर खाए हुन्छ । आफुसँग पाककला भए, अनेकथरी परिकार बनाउन सकिन्छ । स्कुस निकै गुणी तरकारी हो । मानव स्वा’स्थ्यको लागि स्कुस एउटा बहुउपयोगी खानेकुरा हो । स्कुस लौका प्रजातिको एक प्रकारको तरकारी हो । यसको उ’ब्जनीको व्याख्या गर्ने हो भने यो विशेषतः मेक्सिको र ल्याटिन अमेरिकी देशहरूबाट उत्पत्ति भएको तरकारी हो । यसको उत्पादन अहिले त विश्वभरि नै फैलिएको छ । ए’न्टिअ’क्सिडेन्ट र व
नियमित तातोपानी पिउँदा हुन्छन् यस्ता नसोचेका फाइदै फाइदा जान्नुहोस ।
आजक’ल धेरै मानि:स कम मात्रामा पानी पिउने गर्दछन् । एक त पा’नीको मात्रा कम त्यसमा पनि तातो पानी नपिउना:ले शरीरमा बिभिन्न प्रकारको समस्याहरु देखा’पर्दछ । अझ मौसमको परीवर्तन भएसं:ग कतिपयले चि:सो पेय पिउन थालेका छन् । तर चिकित्सक:का अनुसार चिसो भन्दा तातो पानी पिउनु स्वास्थ्यका लागि फाइदाजनक हुने गर्दछ । तातो पानी पिउ:नुका फाइदा निम्नानुसार छन् : -तातो पानीले शरीरको शुद्धि:करण गर्दछ । उमालेको पानी आफै’मा शुद्ध हुने भए:काले यसले शरीर शुद्धिकरणमा सघा’उ पुर्याउँछ । -पाचन प्रणालीमा गड’बडी हुनेहरुले दैनिक दुइ पटक तातो पानी पिउनाले पाचन प्रणा’लीमा स्वस्थ्य पार्नुका साथै नियमि:त गर्दछ । -बिहान उठ्ने बि’त्तिकै तातो पानी पिउँदा शरीरमा ज:म्मा भएका विषाक्त तत्वहरु मुत्रसँगै बा:हिर जान्छन्, यसले पूरै रगत सफा पार्न मद्दत गर्छ । कब्जियतबाट छुटकारा पाउन दिनहुँ बिहान तातो पानी पि’उनु लाभदायक हुन्
स्वास्थ्य : लिची स्वा’दका लागि मात्र नभई स्वास्थका लागि पनि उतिकै फाइदा जनक मानिन्छ । गर्मीको मौ’सम भने आँप, रुख कटहर, लिची'लगायत फलफूलको सिजन पनि हो । सिजन अनुसार फलफुल पनि फरक–फरक खान पा”इन्छ यस्तै यो सिजन अनुसारको फल हो लिचि । देशका विभिन्न स्थानमा गर्मी बढ्दो छ गर्मी सँगै लिचि खानुको छुटै फाइदा छ । यो समयमा बजारमा विभिन्न प्रकारका फल’फुल पाइन्छ । यो समय लिचीको पनि मौस’म हो । लिची स्वास्थ्य’वर्धक हुनुका साथै यससँगै पो'ष्टिक गुण पाइन्छ । लिचीमा कार्बोहा'इड्रेट, भिटामिन सी र बि कम्प्ले’क्ससँगै पोटा'शियम, क्याल्शि'यम जस्ता खनिज पदार्थ पाइन्छ । लिची खाँदा अनुहारमा निखार आउने छ भने चा’उरिपन पनि हट्छ । लिचीमा पाइने क्या'ल्शियम, फस्फो'रसले बच्चाको शारीरिक गठनमा महत्वपु’र्ण भूमिका खेल्छ । लिची आनामा’ मुटु स्वस्थ हून्छ भने सेल्स र ट्युटम पैदा हुनबाट रोक्छ । जसले म'लद्धा'रमा हुने क्य
स्वास्थ्य : तामाको तपाईं अचार, तरकारी वा सुप, के खानुहुन्छ रु जसरी खाए पनि यो स्वादिष्ट त हुन्छ नै यसले मानव स्वास्थ्यमा समेत फाइदा पुया'उँछ । मो सेबनले मुटुको लागी राम्रो फाइदा गर्छ । खासगरी, तामे, निगालो, चोया र भालुबाँस तामाका लागि उपयुक्त हुन्छ । अंग्रेजीमा बेम्बो सुट भनेर चिनिने यो सब्जी क्यानमा प्याकिङ गरिएको समेत पाइन्छ । जुन स्थानीय तामाभन्दा महँगो हुन्छ । तामाबाट विभिन्न परिकार बनाउछ सकिन्छ । बाँसको टुसालाई सीधै तरकारीको रूपमा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ । त्यस्तै, तामाको अचार पनि लोकप्रिय छ । तामा हालेर मासु पकाउँदा थप स्वादिष्ट हुन्छ । खानाको सुरुवाती अर्थात् एप्पि'टाइजर सलादका रूपमा समेत यो उपयोगी छ । बाँसलाई ‘घाँसको राजा पनि भन्ने गरिन्छ । बाँसको कलिलो भागलाई नै तामा भन्ने गरिन्छ । एसियामा यो प्रचलित सब्जी तामालाई हामी अचार वा सब्जीको रूपमा प्रयोग गर्दछौं । तामा एउटा स्वथ्
स्वास्थ्य : दुध स्वास्थ्यका लागि जति गुणकारी मानिन्छ, उत्तिनै बेसार पनि । यी दुबैमा औषधीय गुण पनि हुन्छ । कति यस्ता चिज हुन्छन्, जो आफैमा स्वास्थ्यबर्द्धक हुन्छ । तर, अर्को त्यस्तै बस्तुसँग मिश्रण गर्दा त्यसको गुण हराउँछ वा त्यसले उल्टो असर गर्छ । तर, दुध र बेसार आपसमा मिश्रण गर्दा थप गुणकारी बन्छ । बिगतमा चिसो लाग्दा दुधमा बेसार मिसाएर पिइन्थ्यो । तर, यसले शरीरको चिसो मात्र हटाउने काम मात्र गर्दैन, अरु धेरै फाइदा गर्छ । कसरी पिउने ? : बेसार शुद्ध र मिसावट नभएको हुनुपर्छ । साथै, दुध पनि ताजा र जैविक हुनुपर्छ । सकेसम्म प्याकेटको दुध पिउनुहुन्न । दुध उमालेपछि तर निकाल्नु पर्छ । त्यसमा एक चिया चम्चा बेसार मिसाएर पिउन सकिन्छ । दुधलाई तातो अवस्थामा पिउनु राम्रो मानिन्छ । कहिले पिउने ? : कुनैपनि खानेकुरा कुन समय खाने भन्ने कुराले पनि स्वास्थ्यमा प्रभाव पार्छ । जस्तो दही स्वास्थ्यका लागि